Maxaa ka jira Dunida FTFY?
Email & Fariin Aasaaska
Faahfaahin gaaban oo ku saabsan buug-yar-gaaban internetka
FTFY waa mid ka mid ah buugaagta gaaban ee cajiibka ah ee ku adag in la qaado qiyaasta duurjoogta macnaha. Iyo xaqiiqda ah in ay tahay mid fudud oo caan ah ayaa ka dhigaysa mid aad u jahawareersan kuwaas oo laga yaabo inay u arkaan markii ugu horeysay.
FTFY waxay u taagan tahay:
Xaqiiji in aad.
Dareemo hada, sax? Sidaa darteed markaad rabto inaad qof u sheegto in aad bedeshay wax ay internetka ku galiyeen si ay u bartaan si ka sii fiican, waxaad si fudud u oran kartaa FTFY waxayna rajeyneysaa inay ogaadaan waxa ereyga gaaban yahay.
Sida loo isticmaalo FTFY
FTFY waxaa loo isticmaali karaa dhowr siyaabood oo kala duwan. Marka hore waa in la isticmaalo marka dhibaatada farsamo ay soo baxdo. Si la mid ah sida aad qof u sheegi kartid inaad adigu wax u dhigtay, waxaad si fudud u diri kartaa ama qori kartaa FTFY si aad u ogaysiiso qof inuu kuu sheego wax kasta oo laguu keenay.
Habka labaad ee loo yaqaan 'FTFY' waa kan labaad oo laga yaabo inuu isticmaalo FTFY waa inuu isticmaalo kaftan. Tusaale ahaan, waxaad ka jawaabi kartaa qof adigoo "dejinaya" faallooda asalka ah ama boostada oo leh fariin ama fariin gaar ah. Markaad ku dareyso FTFY, waxaad asal ahaan u leedahay inaad u malaynayso in ay faalladooda / post ay khaldan yihiin oo ayaguna saxan yahay - qaab jilicsan oo dabcan ah.
Tusaalooyinka sida FTFY loo isticmaalo
Saaxiibka # 1: "Ma furi karo dukumintiyada aad soo dirtay."
Saaxiibka # 2: "FTFY. Ka soo horjeeda PDF."
Muuqaalka kor ku xusan, Saaxiibka # 1 wuxuu u sheegayaa Saaxiibka # 2 dhibaatada farsamo ee uu haysto faylka dokumentiga ah ee la wadaago oo la wadaago . Saaxiibka # 2 wuxuu xalliyaa dhibaatada adoo bedelaya faylka qoraalka iyo dib u soo celinta. Ku darida FTFY bilowga waa hab degdeg ah oo sahlan oo loo ogolaan karo saaxiibka # 1 inuu ogaado in dhibaatada la hagaajiyay.
Saaxiibka # 1: "Wax walba waxay ku dhacaan sabab!"
Saaxiibka # 2: @Friend # 2: "Wax walba waxay u dhacaan si aan kala sooc lahayn! Ftfy."
Muuqaalka labaad ee kor ku xusan, waxaanu ku aragnaa sida FTFY mararka qaarkood loo isticmaali karo in ay kaftamaan iyadoo si daacad ah u sharraxaysa faalladiisa / fekerkiisa iyo ka dibna "hagaajin" adigoo badalaya fikradiisa. Saaxiibka # 1 ayaa laga yaabaa inay faallo ka bixiso warbaahinta bulshada si loo helo dadaal iyo dhiirigelin, laakiin Saaxiibka # 2 ma aqbalo faalladiisa iyada oo aan si rasmi ah uga jawaabin waxa uu u malaynayo inuu sax yahay. Ku darista FTFY asal ahaan waxay tiraahdaa: "Waxaan kaashanayaa hareeraha qadar yar." Waxay ku xiran tahay asalka rasmiga ah si ay u go'aamiso in jawaabta FTFY ay tahay mid aan loo baahneyn oo qosol leh ama aan xishood lahayn.
Saaxiibka # 1: "Waan ka xumahay anigana kama dhicin habeenkii xalay."
Saaxiibka # 2: "* Waxaa jira FTFY"
Tusaalahan ugu dambaysa, waxaannu aragnaa sida FTFY loo isticmaali karo si loogu daboolo saxashada dadka kale iyo khaladaadka naxwaha. Mid ka mid ah isbeddelada internetka ee ugu weyn waa in lagu daro calaamado ka hor inta aanad saxin hufnaanta ama naxwahaaga qof kale, laakiin waxaad ku dari kartaa FTFY si aad uga dhigto dharbaaxadaada xittaa sii dheer. Inta badan lama huraan si loo saxo khaladaadka yar yar ama qaladaadka naxwaha ee wada hadalka tooska ah ama farriimaha bogga intarneedka, laakiin marba markaa ka dibna lagu daro FTFY ilaa dhamaadka waxay noqon kartaa isku day xiiso leh oo lagu jiidayo lugta qof.
Google Allo - Dib-u-eegida Macluumaadka Macmiilka ee Akhriska ah
Maxay LML u taagan tahay iyo micnaheedu?
U Isticmaal Qodobada Muhiimka ah ee Fariimaha Muhiimka ah
Maxaa loola jeedaa FWM?
3 Isticmaal Cusub oo Cusub oo Dhisaya mustaqbalka farriimaha
Sida loo Isticmaalo Muuqaalka Mudanayaasha 2013 iyo 2016
Sharaxaadda Farriinta Farriinta iyo Xadidiisa
Muxuu yahay Mujaahidiinta MWF?
Sidee Base64 Ku shaqeynayaan
Sida Loo Wadaago Gacantaada Gmail-ga Dawlad Dibedeed
Muuqaal Sawir Sawirka
Tilmaamaha Habboon ee iPad
Miyaad u Baahan Tartan Guri?
Telefoonada 6-da ee ugu fiican ee Telefoonada ah oo lagu iibsado 2018
Saaxiibadayada ugu Fiican ee Google Easter Eggs
Sida Loo Toqdo Muuqaalka Sound on PowerPoint 2007 Slideshows
Xaqiiqooyin waxtar leh oo ku saabsan sida Wi-Fi u shaqeeyo
Sida Gameshare on Xbox One
Dib-u-eegista SOS Online
"Sims": Samaynta saaxiibo
Healthline - Mashiinka Baaritaanka Caafimaadka
Maxaan U Baahan Yahay Injiyadayda Guriga Inaad Daawatid 3D?
Canon CanoScan LiDE 210 Scanner Scanner
Sida loo nadiifiyo xogta gaarka ah ee Mozilla Firefox
Ku dar oo Maamul sawirrada Facebook
Ereyga Cabbiraada Aaladaha Daabacaadda: Muuqaal Muuqaal
Ku soo Diiwaangalinta Buugga Cinwaankaaga Eudora ee Faylka CSV
Waa Maxay Tilmaamaha Maqalka ee Dareewalka?
M-Audio Axiom AIR 25 Dib-u-eegid